Blọọgụ - Ntuziaka ịzụrụ mkpọchi mkpuchi onwe
Ihe kacha mkpa ị nwere ike ime iji chebe ngwongwo gị na ngalaba nchekwa bụ ịhọrọ ebe nchekwa, nke edobere nke ọma.Ihe nke abụọ?Ịhọrọ mkpọchi ziri ezi.
Itinye ego na ezigbo mkpọchi kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa nke onye na-agbazinye ụlọ nchekwa ọ bụla, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-echekwa ihe bara uru.Enwere ọtụtụ mkpọchi dị elu nke ị nwere ike zụta iji chekwaa ebe nchekwa gị nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Kedu ihe ị ga-achọ na mkpọchi nchekwa onwe nke dị elu?
Mkpọchi nchekwa siri ike ga-egbochi ọtụtụ ndị ohi, n'ihi na oge na mgbalị iji mebie mkpọchi ahụ ga-eme ka ohere ha nwee ike ijide.Mgbe ị na-ahọrọ mkpọchi nchekwa, tụlee atụmatụ ndị a:
Mkpọchi bụ akụkụ nke mkpọchi nke dabara site na nkpọchi/hasp nke ọnụ ụzọ nchekwa gị.Ị ga-achọ agbụ nke toro oke nke ga-adaba na hap.Gaa na ihe mkpuchi dayameta kachasị oke ị nwere ike nke ka ga-adaba na hap.Ihe mkpuchi 3/8 ″ dayameta ma ọ bụ sie ike ga-ezuru ọtụtụ ndị ọrụ.
(2) Usoro mkpọchi
Usoro mkpọchi bụ usoro ntụtụ nke na-ejide eriri mgbe ejiri echekwaa mkpọchi.Mgbe itinye igodo ahụ, a ga-ahapụ ya.Ka mkpọchi na-enwekwu ntụtụ, otú ahụ ka ọ na-esiwanye ike ịchọta.Anyị na-akwado ịhọrọ mkpọchi nke nwere ma ọ dịkarịa ala ntụtụ ise maka nchebe kachasị mma, mana asaa ruo 10 dị nchebe karị.
(3) Mkpọchi ahụ
Nke a bụ akụkụ nke mkpọchi nke na-etinye usoro mkpọchi.Ahụ akpọchi kwesịrị ịbụ ọla niile, ọkacha mma nchara siri ike ma ọ bụ titanium.
Boron carbide bụ otu n'ime ihe ndị siri ike n'ụwa.Ọ bụ ụdị seramiiki nke a na-eji na akwa mkpuchi mgbọ na ihe agha tankị.A na-ejikwa ha eme mkpuchi mkpuchi dị elu.Ọ bụ ezie na ha bụ ụdị mkpọchi kachasị ọnụ nke ị nwere ike ịzụta, ọ na-esiri ha ike ịkpụ na ndị na-egbutu ihe.Maka ọtụtụ ndị bi n'ụlọ, mkpọchi dị otú ahụ nwere ike ịka oke, mana ọ bụ nke kachasị nchebe.
Ụdị 3 nke mkpọchi nchekwa
(1)Mkpọchi enweghị igodo
Mkpọchi enweghị igodo anaghị achọ igodo kama ọ chọrọ itinye koodu nọmba ma ọ bụ ịkpọ nchikota.Ebu ụzọ mee mkpọchi enweghị igodo maka ụgbọ ala nwere sistemu ntinye dịpụrụ adịpụ mana a na-eji ya eme ihe niile site n'ọnụ ụzọ ụlọ obibi ruo na mkpuchi mgbatị ahụ na ngalaba nchekwa.
Ụdị mkpọchi a nwere otu nnukwu uru: mma.Ịkwesighi ichegbu onwe gị maka idobe igodo gị ma ị nwere ike ịnye ndị ọzọ ohere.The downside?Onye ohi nwere ike chepụta koodu gị.A na-ejikwa ọkụ eletrik arụkwa ụfọdụ mkpọchi ma ị gaghị enwe ohere mgbe ọkụ ahụ kwụsịrị.Ọtụtụ mkpọchi igodo na-enweghị igodo dịkwa mfe iji ndị na-akpụ ihe gbutuo ya.
Mkpọchi, ma ọ bụ mkpọchi cylinder, nwere ntụtụ n'ime cylinder nke igodo na-emegharị.A na-ahụkarị ụdị mkpọchi a na akpa ma ọ bụ n'èzí.N'ụzọ dị mwute, mkpuchi mkpuchi abụghị ezigbo nhọrọ maka ebe nchekwa n'ihi na enwere ike ịmegharị ya ngwa ngwa na-ewepụghị mkpọchi ahụ ma ọ dị mfe ịchọta ndị ohi.
Mkpọchi diski bụ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ na emere ha kpọmkwem maka nkeji nchekwa onwe.Enweghị ike iwepu mkpọchi diski site na iji ndị na-egbutu ihe n'ihi na enweghị ike iru hap (ma ọ bụ akụkụ U nke mkpuchi mkpuchi).Enweghị ike iji hama gbajie mkpọchi diski, ma, dịka mkpọchi ma ọ bụ mkpọchi enweghị igodo nwere ike ịbụ.Ụdị mkpọchi a na-esikwa ike ịhọrọ: ọ dị mkpa ka a kpụchaa ya, nke na-ewe oge, ma na-eme mkpọtụ.
Mkpọchi diski bụ nhọrọ kacha echekwabara maka ngalaba nchekwa onwe yana ọtụtụ ụlọ ọrụ ịnshọransị na-enye obere ego ma ọ bụrụ na i jiri ụdị a chekwaa unit gị kama ịgbachi nkịtị.
N'ebe ahụ, ị ​​​​nwere ya, ihe ndị dị mkpa ịmara gbasara ịnweta mkpọchi maka ngalaba nchekwa gị.Naanị cheta, anyị na-akwado mkpọchi diski maka ọtụtụ ọnụ ụzọ nchekwa onwe.
8'x8' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 10x8, Ọnụ ụzọ ebe nchekwa 16x7, Ọnụ ụzọ 16'x8' Garage, Mkpọchi diski maka nkeji nchekwa, 8'x7' Ọnụ ụzọ ebe nchekwa,